अब शेरबहादुर र रामचन्द्र दुवैबाट पार्टी चल्दैन : सिंह- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
– आगामी महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वको सही मूल्यांकन गर्छ
– सभापति प्रतिनिधिले चुन्ने हो, भारतले होइन
– प्रधानन्यायाधीशमाथिका आरोपबारे संसद् बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ
मंसिर १, २०७८ कुलचन्द न्यौपाने
काठमाडौँ — कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व लिन पहिलो पुस्ताका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलका साथै दोस्रो पुस्ताका आधा दर्जनभन्दा बढी नेता आकांक्षी देखिएका छन् । आसन्न महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेतृत्व पहिलो पुस्तामै रहला कि दोस्रो पुस्तामा सर्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ । कांग्रेस महाधिवेशन र भावी नेतृत्वबारे संस्थापन पक्षबाट सभापतिका प्रत्याशी प्रकाशमान सिंहसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
पार्टी महाधिवेशनको संघारमा सुटुक्क भारत पुगेर आउनुभयो । कस्तो संकेत पाउनुभयो त ?
बर्दियामा गणेशमान सिंहको पूर्णकदको शालिक अनावरण कार्यक्रममा जाँदा त्यतैबाट भारत गएको हो । तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्ला, पार्टीको १२ औं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला पार्टी सभापति, म महामन्त्री भएपछि पहिलोपल्ट सभापतिजीसँगै भारत गएको थिएँ । त्यसपछि बल्ल गएको हुँ ।
भारतमा कसलाई भेट्नुभयो त ?
भारतमा थुप्रै नेपाली साथीभाइ छन् । उनीहरूले भारतमा पनि गणेशमान फाउन्डेसनबाट केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनिरहेका थिए । तर समय मिलेको थिएन । बर्दिया जाने समय निकालेर दिल्ली गएको हो ।
भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेट गरेको चर्चा छ त ?
होइन । पत्रपत्रिकाले कुन सूचनाका आधारमा लेखे मलाई थाहा भएन ।
पार्टीको सभापति उठ्न खोजिरहेकै बेला भारतसँगको ‘कनेक्सन’ मिलाउन जानुभएको भन्ने छ नि ?
होइन । विशुद्ध प्राइभेट भिजिट हो ।
कांग्रेसको महाधिवेशनमा कसलाई सभापति बनाउने भन्नेमा भारतको भूमिका पनि अर्थपूर्ण हुन्छ भनेर सबै नेताहरू भन्नुहुन्छ त ?
भन्नेहरूले के–के भन्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । मुख्य कुरा पार्टी सभापति महाधिवेशन प्रतिनिधिले छान्ने हो । कार्यकर्ताले क्षमता, समयको माग र पार्टी हाँक्न सक्ने अनुहार हेरेर मूल्यांकन गर्छन् र मत दिन्छन् । पार्टीमा कसले के गर्‍यो, प्रजातन्त्र संकटमा परेका बेला कुन नेताले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने हो । भारतले सभापति बनाउने होइन ।
भारतको भूमिका नै हुन्न भनेर पूर्णरूपमा नकार्न सक्नुहुन्छ ?
प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन । भारत छिमेकी हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो संघर्ष गरेको पार्टीको महाधिवेशनप्रति सद्भाव होला, त्यो अलग्गै पाटो हो । तर, पार्टी दर्ता गर्दा नै कार्यकर्ताको नाम, नागरिकता, सदस्यताको संख्या आवश्यक हुन्छ भने भारतको प्रभाव पर्ने कुरा कसरी हुन्छ ?
महाधिवेशनकै मुखमा नेताहरू किन भारत धाइरहेका छन् त ?
त्यसरी धाइरहने नेताहरूलाई सोध्नुहोला । मेरो हकमा ९/१० वर्षपछि मात्रै भारत गएको हुँ । गणेशमान फाउन्डेसनबाट अझै राम्रा काम गर्न सकिन्छ कि भनेर साथीहरूसँग छलफल गर्न गएको हुँ । ‘गभर्मेन्ट–टु–गभर्मेन्ट’ र ‘पार्टी–टु–पार्टी’ सम्बन्ध हुन्छन् । हामी पार्टीबाट केही दिनअघि पार्टीसँगको सम्बन्धका लागि एउटा टोली भारत गएको थियो । त्यस्तै व्यक्तिगत तहमा पनि सम्बन्ध हुन सक्छन् । तर म विशुद्ध नेपाली साथीभाइ भेट्ने प्रयोजनका लागि मात्रै गएको हो ।
महाधिवेशन आउन तीन साताभन्दा कम छ, अब तपाईंहरूको समूहबाट सभापतिको उम्मेदवार हुने नेता को हो त ?
१३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले पार्टी विधान र विधिसम्मत रूपमा पार्टी चलाउन सकेन । अवसर पाएर पनि अवसर सदुपयोग गर्न नसक्नेलाई नेतृत्वलाई अब १४ औं महधिवेशनम निरन्तरता दिन हुन्न भन्ने भावना आम कार्यकर्तामा छ । वर्तमान नेतृत्वले समयको माग, विधान र विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलाउन सकेन । चार वर्षभित्र गर्नुपर्ने पार्टीकै महाधिवेशन गर्न नसकेर संवैधानिक संकटतिर पार्टीलाई पुर्‍याइयो । ०७४ को निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो हार व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसैले यस पटक नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा हामीले उठाएका छांै । मेरो विचारमा उम्मेदवार दिने केही दिनअघिसम्म कसले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने तय होला ।
०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी हो कि वाम गठबन्धनको कारण हो ?
१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले २३ सिट मात्र जित्यो । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा चार जना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भए । तर, संविधान जारी हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्‍यो । कांग्रेसका लागि राजनीतिक उपलब्धिको योभन्दा ठूलो मुद्दा अरू हुन सक्थेन । संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि कांग्रेसले म्यान्डेट पाउनुपथ्र्यो । तर, कम्युनिस्टलाई झन्डै दुई तिहाइको म्यान्डेट जनताले दिए । यसमा वाम गठबन्धन मात्रै कारण होइन । नेतृत्वको समस्या पनि मुख्य कारण हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउँछु, त्यसका लागि एकपटक मलाई अवसर दिनुहोस् भन्दै आउनुभएको छ नि ?
यो भन्ने कुरा मात्रै हो । विधानअनुसार दुई पटक लड्न पाउने अधिकार उहाँलाई छ । विधि, नियम र विधानले निर्देशित गरेका कामहरू समयमै गर्न नसक्ने नेतालाई फेरि नेतृत्वमा लैजान हुन्न भन्ने हाम्रो कुरा छन् । पार्टीलाई सुदृढीकरण, शुद्धीकरण, संस्थागत गर्ने हो भने अबको नेतृत्वबाट चल्दैन । पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउँछु भन्ने कुराको विश्वास पनि छैन । यो पार्टीलाई ‘रिभाइव’ गर्न सक्ने नेता र टिमलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ ।
म भए सब ठीक हुन्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
सभापतिका लागि म प्राकृतिक उम्मेदवार हुँ । पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजनीतिक सुरु गरेर नेविसंघको जिल्ला अध्यक्ष, पार्टीको जिल्ला सभापति हुँदै केन्द्रीय उपसभापति, निर्वाचित महामन्त्री भइसकें । म पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि पनि लडेको मान्छे हुँ ।
शेरबहादुर देउवा अहिले पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । तपाईंहरू आफ्नै समूह मिलाउन सक्नुभएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा नेतृत्व ल्याउन सक्छौं भन्ने लाग्छ ?
कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको पार्टी हो । राजनीतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्ने खुबी भएका कार्यकर्ता कांग्रेसमा छन् । १३ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व लिएका नेताको मूल्यांकन अबको १४ औं महाधिवेशनले गर्छ ।
तपाईं कांग्रेसको नेतृत्व लिनुभयो भने अहिले नभएका कुरा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ?
कांग्रेसलाई संस्थागत र सक्षम पार्टी बनाउन सक्छु । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । तर, अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाएको छैन । त्यसलाई पूर्णता दिने मुख्य जिम्मेवारी छ । अर्कोतर्फ आर्थिक समृद्धिको चाहना छ । आम नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै हरेक नेपालीको जीवन र जीविकोपार्जन सहज बनाउन म लाग्नेछु । संस्थापक नेताहरूले कठिन दिनहरूमा कांग्रेसलाई जसरी नेतृत्व दिनुभयो, त्यस्तै आशा र भरोसाको पार्टी बनाउन चाहन्छु । १४ औं महधिवेशन समाप्त भएको दिनदेखि नै संगठनलाई परिचालन गर्ने, आर्थिक सम्पन्नताको चाहनालाई पूरा गर्ने अभियानमा लाग्नेछु ।
कांग्रेसको संगठन वडादेखि नै विभाजित छ । त्यहीँबाट आउने प्रतिनिधिले मूल्यांकन गरेर तपाईंले भनेजस्तै नेतृत्व छानिएला ?
लोकतान्त्रिक पार्टीमा महाधिवेशनका बेला प्यानल बन्नु स्वाभाविक हो । तर, नेतृत्व चयन गर्ने बेला मतदाताले अवश्य सोच्छन् भन्ने लाग्छ । कमजोर नेतृत्वकै पुनरावृत्ति भयो भने आफ्नो पनि भविष्य हुन्न । यो कार्यकर्तालाई राम्ररी थाहा छ ।
तपाईंहरूबाट को उम्मेदवार हो त ?
एक हुने कुरा सामान्य गणितको हिसाबकिताबले हुँदैन । राजनीतिक गणित सिधा रेखामा चल्दैन । मैले १३ औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र दाइलाई समर्थन गरेको हो । जीउज्यान लगाएर जिताउने प्रयास पनि गरेकै हो । गएको महाधिवेशनमा म निर्वाचित महामन्त्रीको हैसियतमा थिएँ । मैले नदोहोर्‍याएर शशांक कोइरालालाई छाडेकै हो । तपाईं गणेशमानको छोरा, अनुभव पनि छ, धेरै जिम्मेवारी पनि छ, अघि बढ्नुहोस् भनेपछि मैले शेरबहादुर दाइसँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ । उम्मेदवारहरूमध्येमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा कसलाई अघि सार्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।
गणेशमानको छोरा हुँ, विरासतले काम गर्छ भन्ने ठानेर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नुभएको हो कि ?
गणेशमानको विरासत छँदै छ । तर, संकटको घडीमा म पास भएको ठान्छु । जस्तोसुकै संकटमा पनि पछि हटेको छैन । जस्तो कि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गर्दा कसैले यो असंवैधानिक हो भनेर भन्न सकेका थिएनन् । मैले नै पहिलोपल्ट यो असंवैधानिक छ भनेर ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध लडेको मान्छे हो ।
तपाईंले राजधानीबाहेक केही हेर्नुहुन्न, राजधानीमा पनि साम्प्रदायिक सोचले काम गर्छ भनेर तपाईंमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
सबैले मेरो तारिफ गर्दैनन् । प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो इच्छा पूरा गर्न भए–नभएको कुरा गर्नुपर्छ । काठमाडौं देशकै राजधानी हो । काठमाडौंको नेतृत्व सम्हालेर आएको व्यक्ति हुँ । काठमाडौंको भए पनि बाहिर यसको कुनै प्रभाव छैन भन्ने कुरा गलत हो । १२ औं महाधिवेशनमा काठमाडौंको भोटले मात्रै म महामन्त्री भएको हो त ? त्यस बेला पनि देशभरकै महाधिवेशन प्रतिनिधिले मलाई मत दिएर जिताएका हुन् । दसौं महाधिवेशनमा पहिलोपल्ट केन्द्रीय सदस्य लड्दा मेरो तेस्रो स्थानमा मत आएकै हो ।
तपाईंको धारणा शेरबहादुर देउवासँगै रामचन्द्र पौडेलले पनि नेतृत्वको आकांक्षा राख्न हुन्न भन्ने हो ?
हो । उहाँहरूले अहिलेसम्म जे जति गर्नुभयो, धेरै गर्नुभयो । उमेर पनि भयो । अब सम्मानजनक रूपमा बिदा हुनुपर्छ । ०४६ सालदेखि पार्टीमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि । उहाँहरूले कांग्रेसको नेतृत्व लिएपछि पार्टीको अवस्था कस्तो भएको छ ? ०४६ अघि कांग्रेसको आकर्षण कस्तो थियो ? सबैको चाहना नेतृत्व परिवर्तनसँग छ । आम कार्यकर्ताका भावनाको सम्मान पनि गर्नुपर्छ ।
पौडेलप्रति तपाईंको असन्तुष्टि मन्त्री छनोटलाई लिएर भएको हो भन्ने छ नि ?
न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यतिबेला राखेको हो । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा २३ जनाले जितेको छ । त्यसमध्ये काठमाडौंमा हामी चार जना छौं । म मन्त्रिपरिषद्मा जाने कुुरा थिएन । बाँकी भएका जो कोहीमध्ये काठमाडौंको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नजायज हो र ?
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कि त तपाईंहरू तीन जना मिलाएर एक जना उम्मेदवार बन्नुहोस्, मिल्न सक्नुहुन्न भने मलाई एक वर्षका लागि सभापति बनाउनु होस् भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
समय धेरै अघि बढिसकेको छ । पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउनुपर्छ भन्ने देशभरका कार्यकर्ताको भावना छ । म देशभर घुम्दा आम कार्यकर्ताले ‘शेरबहादुरजीले त पार्टी चलाउन सकेनन् नै, रामचन्द्रजीबाट चल्दैन है’ भनेर भन्ने गर्छन् । यो कुरा मैले रामचन्द्र दाइलाई भेटेरै भनेको छु । बैठकमा पनि राखेको छु । पछाडि कुरा गर्ने होइन, अगाडि नै कुरा राखेको छु । अहिले हामीले समर्थन गरे पनि यी दुवै नेतालाई भोट दिँदैनन् । उहाँहरूको समय सकियो । हरेक कुरामा विश्राम लिन समय आउँछ । उहाँहरूको पनि अब विश्राम लिने समय हो । अब दुवै नेताबाट पार्टी चल्दैन । यस्तो प्रस्ताव कुन सन्दर्भमा राख्नुभयो, जानकारी भएन । मलाई त्यस्तो प्रस्तावले काम गर्दैन जस्तो लाग्छ ।
रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तपाईंले गर्नुभएको हो ?
व्यक्तित्वअनुसार ठीक व्यक्तिलाई ठीक ठाउँमा लैजानुपर्छ । सबै पदमा मै भन्ने कुरा आउँदैन । व्यक्तित्व हेरेर व्यवस्थापन गर्न खुला छौं । पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत विभिन्न पद छन् । मिलाउन सकिन्छ ।
प्रसंग बदलौं, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालय ठप्प भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि राजनीतिक दल किन मौन ?
यतिबेला राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने दायित्व कांग्रेसले पाएको छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक कुरामा दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ । न्यायालय स्वतन्त्र छ, न्यायालयलाई हस्तक्षेप गर्न हुन्न भन्ने भावनाप्रति सम्मान गर्नुपर्छ । तर न्यायालय नै काम गर्न नसकेको, सेवाग्राहीले सेवा नपाएर ठप्प हुँदा समस्या पन्छाउन हुन्न । ‘न्याय ढिला हुनु भनेको न्याय नदिनुसरह’ भनिन्छ । सरकारले यस्तो रिमते बनेर बस्न मिल्दैन । न्यायालय राज्यकै एउटा अंग हो । न्यायालयमा बेथिति भएको छ भने त्यसको थिति बसाल्ने दायित्व सरकारको हो । विधिसम्मत तबरले के–के गर्दा निकास निस्कन्छ गर्नुपर्छ ।
किन राजनीतिक दलहरू मौन रहे जस्तो लाग्छ ?
मैले त केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै सरकार यसरी रमिते भएर बस्न मिल्दैन भनेको हुँ । न्यायालयको विषयमा यसरी रमिते बन्दा त्यसको असर आउने तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पर्छ । हामीले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नुपर्छ ।
अब दलहरूको भूमिका के हो ?
संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ । प्रधानन्यायधीशमाथि लगाइएको आरोपको त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद् कल गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । अहिलेको मुख्य विवाद प्रधानन्यायाधीशको आचारणलाई लिएर उठेको प्रश्न हो । यसको तथ्य विश्लेषण गरेर संसद्ले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
त्यो भनेको महाअभियोग लगाउने भन्ने हो ?
संसद् बोलाइसकेपछि त्यसबारे पनि छलफल हुन्छ । बैठक बोलाउने समय पनि भइसकेको छ । न्यायालय अझै यस्तै राख्ने हो भने त्यस्तो कदम उठाउन पनि आवश्यक हुन सक्छ ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ १०:१९
कांग्रेसमा अर्को धार बनाउँदै प्रकाशमान
विरासतको आडमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनसमेत दौडधूप
२०४७ देखि एकदशक काठमाडौ सभापति भएका सिंहको उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा बलियो पकड
मंसिर १, २०७८ कलेन्द्र सेजुवाल
काठमाडौँ — कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५७ कात्तिकमा काठमाडौंसहित १६ जिल्लाका कार्यसमिति भंग गरे । काठमाडौं सभापति प्रकाशमान सिंहसहितका नेताहरू केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसे । तर कोइरालाले निर्णय फिर्ता लिएनन् । त्यसको तीन महिनापछि पोखरामा भएको दसौं महाधिवेशनमा कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहपुत्र प्रकाशमान लोकप्रिय मतसहित केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । महाधिवेशनमा सिंहसँगै बीपीपुत्र प्रकाश कोइराला र महेन्द्रनारायणपुत्र विमलेन्द्र निधि पनि पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
उतिबेला सिंह केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुमा गणेशमानको पारिवारिक विरासतमात्र होइन, राजधानी रहेको जिल्लाको बलियो जनमत पनि थियो । पार्टीको महामन्त्री, उपसभापति र सरकारको उपप्रधानमन्त्री भइसकेका सिंह आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको दाबेदार छन् । दुई दशकअघि केन्द्रीय सदस्य बन्ने बेलाझैं अहिले पनि उनको उम्मेदवारीमा काठमाडौंको आड छ । ‘धेरै मतदाता भएको काठमाडौंमा उहाँको बलियो पकड छ, राष्ट्रिय उचाइ बनाइसकेकाले अन्य जिल्लामा पनि राम्रै प्रभाव छ,’ उनीनिकट नेता राजुराज जोशी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि यसपटक सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निश्चित छ, उहाँ धेरै अघि बढिसक्नुभएको छ ।’
२०४७ देखि एक दशक जिल्ला सभापति भएका सिंहको काठमाडौंको कांग्रेस राजनीतिमा बलियो पकड छ । काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित करिब २ सय ७० महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्छन् । उनीनिकट नेताहरूका अनुसार यसपटक सिंहले कम्तीमा ८ निर्वाचन क्षेत्र जित्ने गरी अधिवेशनको तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग जिल्ला अधिवशेनसम्म सँगै जाने गरी भएको सहमतिले पनि उनलाई काठमाडौंमा बलियो बनाएको छ । सिंहइतरले भने १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आधामा सीमित गर्ने गरी गठजोड बनाएका छन् । वाग्मती प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका सिंहनिकट नेता जोशीले काठमाडौं जिल्लाबाट मात्र सिंहको पक्षमा २ सय हाराहारी महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने दाबी गरे । उपत्यकाका अन्य जिल्ला ललितपुर र भक्तपुरमा पनि सिंहको राम्रो प्रभाव रहेको दाबी जोशीको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट करिब ४ सय महाधिवशेन प्रतिनिधि छानिन्छन् । यो संख्या कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित हुनेभन्दा ठूलो हो ।
काठमाडौं जिल्ला सभापतिबाट केन्द्रीय सदस्य भएका सिंह २०५९ मा कांग्रेस विभाजन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा लागे । पार्टीमा उनी उपसभापति भए । विभाजनको ५ वर्षपछि पार्टी एकीकरण भएसँगै उपसभापतिकै हैसियतमा कांग्रेसमा फर्किए । २०६७ असोजमा भएको १२ औं महाधिवेशनमा विमलेन्द्र निधिलाई हराउँदै महामन्त्री बनेपछि सिंह पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए । त्यही बलमा १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा दाबी गरे पनि अन्तिम समयमा उनले रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेका थिए । यसपटक पूर्वसहमतिअनुसार पौडेलले आफूलाई सभापतिमा सहयोग गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । तर पौडेलसँगै उक्त समूहका नेताहरू शशांक कोइराला र शेखर कोइरालाले पनि आफ्नो दाबेदारी बलियो बनाउँदै लगेका छन् । सिंहको दाबेदारीमा पिता गणेशमानको राजनीतिक विरासतले पनि साथ दिएको छ । तर १४ औं महाधिवेशनमा सिंहसँगै संस्थापक नेत्रापुत्रद्वय शशांक (बीपीपुत्र) र विमलेन्द्र (महेन्द्रनारायण पुत्र) ले पनि सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सिंह पौडेलसँग टाढिँदै गएका छन् । तिहारअघि नेता रामशरण महतको निवासमा बोलाइएको समूहको बैठकमा उनी सहभागी भएनन् । शुक्रबार बत्तिसपुतलीस्थित एक होटलमा भएको समूहको बैठकको बेला उनी भारतमा थिए । १३ औं महाधिवेशनमा भएको सहमतिविपरीत पुन: सभापतिमा दाबी गरेकाले पौडेलप्रति उनी चिढिएका छन् । ‘उहाँले अघिल्लोपटक नै मलाई १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिले आफंै अघि सर्नुभएको छ,’ उनले निकटस्थ नेताहरुसँग भन्ने गरेका छन्, ‘अब उहाँले चुनाव लड्ने होइन, अभिभावक बनेर हामीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ ।’ एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बेला पौडेलसँग उनको सम्बन्ध थप चिसियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पौडेल समूहलाई दुई मन्त्री दिँदा सिंहले आफूनिकट राजन केसीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर समूहमा उनको कुरा सुनुवाइ भएन । ‘त्यसैले पनि प्रकाश दाइले पछिल्लो समय पौडेलको साथ छाड्नुभएको छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्र व्यक्तिगत पकडको हिसाबले पनि उहाँ कमजोर हुनुहुन्न ।’
पौडेल समूहबाट सभापति दाबी गरिरहेका कोइराला दाजुभाइलाई त उनी स्विकार्ने पक्षमा छैनन् । उनी दुवै जनालाई राजनीतिमा आफूभन्दा ‘जुनियर’ र पारिवारिक राजनीतिक विरासतको फेर समातेर राजनीतिक लाभ लिएको बताउँछन् । २०७४ फागुनमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा शशांकले देउवालाई सहयोग गरेपछि सिंह–शशांक सम्बन्ध इगोमा परिणत भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सिंहको मानसिकतामा कोइरालाप्रति पुरानो इगो पनि गढेको देखिन्छ । पार्टी स्थापना र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा बीपीको काठमाडौं बसाइँलाई सहज बनाइदिनेदेखि जिन्दगीभर राजनीतिक सारथि बने पनि पार्टी नेतृत्वबाट आफ्नो पितालाई वञ्चित गरिएको सिंहले गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘मेरो बुवा जिन्दगीभर कोइरालालाई सफल बनाउन लागिपर्नुभयो, तर सभापति बन्न दिइएन,’ उनले निकटस्थसँग भन्ने गरेका छन्, ‘अहिले पनि कोइराला भएकै कारण मभन्दा जुनियरलाई नेता मान्न सक्दिनँ ।’ २०१२ माघमा भएको कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनमा गणेशमान सभापतिको आकांक्षी रहे पनि बीपीले सुवर्णशमशेरलाई समर्थन गर्दा उनी नेतृत्वबाट वञ्चित भएका थिए । पञ्चालयकालमा पनि बीपीले कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिएका थिए ।
कांग्रेस राजनीतिमा राष्ट्रिय उचाइ बनाए पनि सिंहको देशव्यापी छुट्टै समूह भने छैन । उनी १२ औं महाधिवेशन अघिसम्म कोइरालाविरोधी खेमामा थिए । उक्त महाधिवेशनमा भने सुशील कोइराला प्यानलबाट महामन्त्री निर्वाचित भए । त्यसयता उनी देउवाइतर समूहमा छन् । देउवाको कार्यशैलीबारे सबैभन्दा चर्को आलोचना गर्ने नेतामा उनी पर्छन् । ६६ वर्षीय सिंह सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल दुवै जनाले नेतृत्वको चाहना त्यागेर संरक्षकको भूमिकामा बस्नुपर्ने धारणा राख्छन् । पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न उनले काठमाडौंको आडमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जगतप्रकाश नाड्डालाई भेट्न बिहीबार नेपालगन्जको बाटो हुँदै नयाँदिल्ली गएका थिए । उनीसँगै गएका नेता जोशीले भारत भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट भएको बताएका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ १०:०६